Jesosy nahatanteraka ny lalàna | Apg29
Moa ve isika mba hanatanterahana azy io?
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra villolärorna izay hitombo amin'ny Kristianina amin'izao andro izao dia ny tokony hitandrina ny lalàna, satria Jesosy "tanteraka" izany.
I Jesosy, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia niantso:
"Vita!" (Jaona 19:30)
Inona no zavatra izy fa vita?
Raha i Jesosy no nahavita ny lalàna, inona no tokony isika dia ho afaka namita azy io? Tsy tsara isika dia afaka manao izany tsara kokoa noho ny an'i Jesosy?
Ny lalàna dia afa-po ny finoana
Ry namako, isika, manaiky ny lalàna vita avy azontsika an'i Jesosy sy mino azy. Tsy afaka hihaona ny lalàna, fa ny lalàna tanteraka ao amintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy, satria Izy no efa tanteraka sy fenoina izany.
Romana 8: faha-3 Fa inona no azo atao fa ny lalàna satria nalemy noho ny nofo, Andriamanitra nanao rehefa naniraka ny Zanany, nofo ota sy ny amin'ny ota fanoharana, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, 4 mba manamarina ny fitakiana lalàna dia ho tanteraka ao amintsika izay tsy miaina araka ny nofo, fa araka ny Fanahy.
Tsy afaka ny tenany hanatanteraka ny lalàna amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa ho an'ny famonjena - na araka ny nitory matetika amin'izao fotoana izao: foana ny famonjena antsika. - mitandrina ny famonjena amin'ny alalan'ny fihazonana mafy an'i Jesosy, satria Izy no efa vita sy tanteraka ny lalàna.
Inona no atao hoe ny lalàna?
Inona no zavatra iray no lalàna? Moa ny marobe ny lalàna sy ny fepetra izay tokony hitandrina? Tsia, tsy tena.
Ny lalàna dia ny filazantsara satria ny momba an'i Jesosy. Tadidio Emaosy mpirenireny? Koa eto ny voasoratra ao amin'ny Baiboly:
Lioka 24:25. Dia hoy izy [Jesosy] taminy: Ry adala, ka dity ianao saina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany! 26. Moa tsy tokony Kristy ho niaritra izany ka hiditra any amin'ny voninahiny? 27 Ary Jesosy niteny tamin'i Mosesy [ny Lalàna] sy ny mpaminany rehetra ary nanazava tamin'izy ireo izay tonga teo aminy ao amin'ny Soratra Masina rehetra.
Ao amin'ny soratra masina dia ny momba an'i Jesosy, ary toy izany koa ao amin'ny lalàna.
Mamaky ny Baiboly tsy mety raha mamaky azy io ho toy ny bokin 'ny lalàna izay efa nasainy nokapohina nitsena, fa mamaky azy io tsara raha mahita an'i Jesosy sy ny fahasoavany, ary efa vita izay rehetra voasoratra momba azy. Tsy tokony hamaky ny Baiboly ho toy ny boky misy ny lalàna, fa ho toy ny nådebok - ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy!
Milaza mazava tsara ny Baiboly fa ny Kristianina raha milaza isika: Tsy manana ota, dia mamita-tena isika. Fa tsy isika izay mino an'i Jesosy voavonjy? Ahoana anefa no manana ota ao amintsika?
1 Jaona 1: 8. Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena ary ny marina tsy ato anatintsika.
Hitanareo, na dia manana ota ao amintsika, dia ny ho lasa voavonjy isika mandray an'i Jesosy sy mino azy. Dia tsy ho voavonjy amin'ny alalan'ny nijanona manota, dia ho voavonjy amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy. Fa rehefa manana an'i Jesosy, tsy manota.
Ianao dia mijanona tsy manota intsony, satria voavonjy ianao sy mino an'i Jesosy. Tsy mijanona ny fahotana mba ho voavonjy. Tsy miasa. Izany dia i Jesosy izay mamonjy ary tsy misy asany.
Ary toy izany ny toe-draharaha ihany koa ny fiovam-po. Ny fibebahana dia fanomezana manaiky fa amin'ny finoana an'i Jesosy.
Asan'ny Apostoly 11:18. Ary raha nahare izany izy, dia nanome ny fiadanana, ka nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe: Avy eo dia Andriamanitra nomena ny jentilisa koa ny fibebahana ho amin'ny fiainana.
Tsy misy olona afaka mibebaka amin'ny fahefany ihany. Fanomezana ny famonjena sofina fa manaiky amin 'ny finoana. Jesosy zavatra rehetra samy nataony mazava tsara toy izany ihany ho antsika ny manaiky. Ianao no namonjena finoana an'i Jesosy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, na inona na inona asa. Tsy misy voavonjy amin'ny alalan'ny asa.
Ary araka izany koa, izany ihany koa raha ny amin'ny ho voaro amin'ny famonjena. Ho voaro noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Tsy satria afaka ny hiaina ao amin'ny fenitra ambony indrindra. Tsy afaka izany hoe tsy ho velona amin'ny avo lenta mba ho ampy foana amin'ny famonjena. Ny fisainana toy izany diso sy dalàna.
Impiry dia efa niresaka momba no hamonjena antsika amin'ny alalan'ny fahasoavana na inona na inona ny asan'ny lalàna? Fa raha ny amin'ny ho voatahiry amin'ny famonjena antsika izany hoe tampoka ny sasany isika no tsy maintsy manao ny asa. Ary avy eo vao ny fahasoavan 'ny lalàna sy ny lalàna tsy mahavonjy. Ny lalàna ao amin'ny Testamenta Taloha ao anatin'ny mitalaho dia ny fahalalana ny ota, dia tsy mahavonjy.
Na inona na inona ny asan'ny lalàna
Tsia, no hamonjena antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy, na inona na inona ny asan'ny lalàna. Ary isika dia ho voaro amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy na inona na inona ny asan'ny lalàna. Toy izany koa isika ho voavonjy ho afaka indray andro amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy na inona na inona ny asan'ny lalàna an-trano rehefa tonga any an-danitra.
Misy ny sasany lagivrare amin'izao androntsika izao, izay mpitsara ny olona araka ny lalàna, ka mandidia azy hitandrina azy. Ny lalàna fa raha ny tenany dia tsy afaka ny hijanona satria efa nanota isika rehetra (Romana 3:23), ary isika rehetra dia manana fahotana eo amin'ny fiainantsika, rehefa läste.De teo aloha no tena masiaka sy manam-pitiavana, rehefa ara-dalàna mitanjozotra ny enta-mavesatra amin 'ny fiaraha-monina izay nipetraka teo hiarovana ny anoloan'ny efijery ny solosaina. tsy hanetsika rantsantanana mba hanamaivanana ny enta-mavesatra. dia masiaka, ary efa nanadino ny fitiavan 'Andriamanitra - ny fitiavana izay nasehony, rehefa maty i Jesosy noho ny fahotantsika. Farany, raha tena te-hanatanteraka ny lalàna sy Holazaiko ny zavatra nambaran'ny soratra masina izay mampianatra ny fomba tokony hatao.
Ny fitiavana no manatanteraka ny lalàna
Romanina 13: 8 Aza trosa na iza na iza na inona na inona, afa-tsy raha ny amin'ny hifankatia. Fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna .
Rome 13:10. Ny fitiavana no manisy ratsy ny namana any, noho izany ny fitiavana no lalàna dia tanteraka .
Galatiana 6: 2 Mifampitondrà izay mahavesatra, ary fenoy izany ny lalàn'i Kristy .
Jakoba 2: 8 Raha toa ka mahafeno ny K ungliga lalàna araka ny Soratra Masina: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao , moa ve ianao rätt.9. Fa raha mitondra fiovana eo amin'ny olona izay manota, ary ho lasa toy izany ny lalàna nambara mandika.
Lalàna toy izany dia tsy afaka ny ho sarotra ny uppfylla.Allt tokony ataonao dia ny fitiavana. Ary ahoana no tia? Satria i Jesoa Kristy dia tia diritti ka mamelà ny helokay.